Self-kulinywe, Ukuphathwa isikhathi
Muva nje, odokotela bengqondo baye baphawula isamba anda ukucindezeleka sabantu. Akumangazi, ngoba izinga okusezingeni eliphezulu zokuphila ezisemadolobheni, futhi sizama ukuba ngesikhathi yonke indawo, indoda ethile ifikelwa hhayi uhlobo ababuthakathaka. Ngakho-ke, zonke Kubalulekile ukuba ukwazi wazi kanjani kutsi bahlele sikhatsi sabo kanye benzuzo bona. Ukulandela imiphumela lokhu ngeke nje sihambisane zonke, kodwa futhi ukuthola amathuba izindaba zomuntu siqu kanye nokungcebeleka. Leli khono kudingeka abadala nje kuphela kodwa futhi izingane. Phela, kusukela zisencane ephumelela kunazo indlela ukufunda okuthile.
Kungani ngidinga ikhono uhlele isikhathi sakho?
Abanye abantu cosha it ngajwayelekile sokufunda indlela yokuphatha isikhathi sakho. Othile ecabanga lena eziningi zabahlakaniphile. Cishe wonke umuntu azi uhlobo lomuntu ohlale ngasekupheleni yonke indawo? Akunakwenzeka ukuthi lokho kungase kubangele emizweni ezimnandi. Kodwa ukuhlela efanele is hhayi kuphela ukuvikela ngokumelene ukubambezeleka, kodwa futhi ikuvumela ukuba siphile ngomuzwa "Ngosuku ube yize." Ngakho, izinzuzo ukuphathwa isikhathi:
Lost rush njalo.
Ihamba lingekho enhle.
Kukhona isikhathi wokuzilibazisa uzohlangana nabangani.
Akukho muzwa wokuthi izinsuku "yize."
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela izibuyekezo.
Njengoba ubona, kusobala, ngokwazi ukuthi uhlela kahle isikhathi, kuyasiza omdala ngamunye. Inzuzo main yaleli, ukuze umuntu ilondolozwe kusuka uhlobo sezinzwa, ukukhathazeka nokucindezeleka kamuva. Ngamanye amazwi, kahle usabalalisa isikhathi, ungakwazi ukugcina impilo.
Izindlela ukuhlela isikhathi
Kwaphela isikhathi eside ukuba khona wathola izindlela eziningi ukuhlela isikhathi sakho. Akukho olulodwa kwesokudla, njengoba kufanele akhethwa ngokusekelwe izici ngazinye psyche. Ngokwesibonelo, esigabeni ngasinye has izimiso zalo siqu Management, isikhathi. Kuhleli obala ukuthi isikhathi ukuhlela umfundi kulula ukudlula isikhathi isisebenzi izikhundla ezibalulekile.
Okokuqala nokusemqoka, ukuthenga idayari. Kuyoba - unquma. Abanye abantu bakhetha notebook nge razlinovkoy ngezinsuku okunye ukwahlukaniswa elula amasonto, kanti eyesithathu kuyadingeka ukuhlanza amashidi amhlophe. Kunoma ikuphi, udinga okuthile lapho uqopha isimiso sakho. Ungafuni ukuthola eqolo noma ukhetho nengabizi. Khetha ukuthi yini oyithandayo. Into esemqoka ukuthi uzobe ukhululekile ukuyisebenzisa.
Inketho okuthuthukisiwe - Diaries electronic. Ziningi izinhlobo ezahlukene izinhlelo kungenziwa egcizelele ukunambitheka yakho. Futhi iningi lazo kukhona ukuvumelanisa nge smartphone noma ithebulethi.
iphuzu elisemqoka aliveza: nsuku zonke kumele njalo phambi kwamehlo ethu, futhi ngokushesha enze izinguquko kuso.
Uma ubukade akazange azame ukuhlela isikhathi sakho, khona-ke kufanele uye ngayo ebunzimeni obuningi. Ngakho-ke, manje khumbula ibinzana "Better - isitha ezinhle" futhi uzame ukuba ungakhathazeki. Lapho umuntu efunda okuthile, khona-ke akuwona wonke nje kuvela kahle, futhi lokhu kungokwemvelo.
Omunye kumele njalo silwele ukwenza enhle, kodwa indlela ngeke vela kulungile, futhi lokho kulungile, ngoba ukuhlela isikhathi sakho akulula, zingayazi indlela yokukwenza. Ngakho baphikelele.
Nquma umqondo wokuphila
Kunoma ikuphi kubalulekile ukuqaphela imigomo yabo. Ukuze wenze lokhu ngesikhathi Management, (okubizwa ngokuthi isayensi umkhakha sendlela ukuhlela isikhathi sakho) wamukela I washaywa ezintathu izinhlobo imigomo. imigomo Lokhu eside, izinjongo esimaphakathi futhi wazibekela imigomo yesikhathi esifushane. On wonke umehluko kuphela, ngasiphi iphuzu isinqumo sokuthi eyisebenzisa.
Ngakho-ke, i-Ukubusa ebaluleke - ukubhala phansi imigomo yakho. Qiniseka ukukwenza ephepheni. Okuwukuphela kwendlela uzokwazi zigcwalisa lezo ziprofetho. Kungani na? Uma ubhala igoli, uthatha futhi imizimba. Uma ubona uhlu lwemigomo, khona-ke uyobona uhlelo ibhizinisi lakho. Wenzenjani sihlukanise ukolweni emakhobeni, ngaphandle yesibili esemqoka. Phela, ngaphambi udinga ukuthola ncamashí ukuhlelwa, kungani udinga kuka ukunquma indlela engcono kutsi bahlele sikhatsi sabo.
kuchazwa Kusobala ngokuya imigomo ukusebenza. Kungani na? isikhathi efiphaziwe - imigomo usongene, kulandela ekuzuzweni kwemiPhumela engenakwenzeka. A ngokucacile nokukhawulela yena ngokuqondene nesikhathi esishiwo, wena sithwale imithwalo yemfanelo ethile.
Kusiza ngezinhloso okukhiwa lapho kwenziwa uhlelo lokusetshenziswa
Kulabo kuphela ukwazi ukuthi kutsi bahlele sikhatsi sabo, kunzima ukuhlukanisa ebaluleke kusukela umgomo yesibili. Ikakhulukazi kanzima sikhishwa ngokuya imigomo yesikhathi eside. Yenza umsebenzi elula: Thatha ishidi ehlanzekile nephepha ubhale phansi yonke into izifiso, ukusuka kokulula kuya ekhexisayo. Phela, konke umqansa i ingqondo. Ngemva uhlu eceleni bese ubuyela ke ngemva kwezinsuku ezimbalwa. Ngemva kwalokho, kusukela bhala olotshelwe kuphela yini ebalulekile kuwe. Ngakho uthola uhlu lwakho imigomo yesikhathi eside.
Isici yemigomo esimaphakathi
Udinga ukuba nohlelo phambi kwamehlo iminyaka emithathu noma iminyaka emihlanu. Ngamanye amazwi, into yomhlaba wonke. Udinga ulwahlukanise ku imigomo amaningi amancane, ihlukaniswe amabhlogo nyangazonke. Lokhu izinyathelo ezincane bebheke impumelelo yayo enkulu. Kubalulekile ukuthatha ezindaweni akhawunti ezifana nezempilo, ukuzilibazisa, ezemidlalo, imfundo, ukuzijabulisa.
Uhlu okuholela njalo ukugcina phambi kwamehlo ethu, njengoba ngokuhamba kwesikhathi ungenza izinguquko kuwo.
Indlela yokuphatha isikhathi sakho kahle?
Njengoba ngithenge idayari - Zijwayeze ukubhala kuyo nsuku zonke. Kwenze umkhuba ukwenza icebo usuku enkulu eyayine ngayizolo. Lokhu kuzovumela ukuthi ulondoloze amahora amaningana. Yiziphi izinzuzo wale ndlela?
I-oda yokwenza izinto.
Ukudweba up umzila yezokuthutha.
Ephusheni, enganakile assimilates Imininingwane kangcono.
Usuku kwepulani eside imigomo zikuvumela ukuthi lilinganise izinto.
Ukubonakala imigomo esebenzayo futhi kuphelile.
Ngamanye amazwi, ukuhlela usuku ngalunye - into ewusizo. Iphinde ikuvumela ukuba kahle izinto eziza kuqala. Lokhu kuzovumela ilungelo ukugubha ibhizinisi kahle.
Cabangela imijikelezo oyizalayo. zikhona nezikhathi ngabanye womsebenzi kanye nokuphelelwa ngamandla komnotho walo wonke umuntu. Ngakho-ke, kunengqondo ukuphetha ukuhlela ibhizinisi yabo nge-akhawunti yazo. Ngokwesibonelo, ibhizinisi okhandlayo emakamu eliphezulu ukunakekelwa okufanele kwenziwe ngesikhathi womsebenzi. Lokhu kuzosebenza ngempumelelo.
Qiniseka ukuthi wabelana injongo zonke ngezigaba. Ngakho uthola ke kulula ukwaba Microcel ngaphakathi kubo futhi nizenze. Ngokwesibonelo, yini ngokuyisisekelo ukwenza usuku? Ucabange ukuthi lokhu umsebenzi, ekhaya, Ukuzinakekela, ezokungcebeleka kanye ubuthongo. Kakade kulezi zigaba yakha uhlu okuhloswe.
Cela usizo? - Yebo!
Abantu abaningi cosha it ngajwayelekile bayeke ibhizinisi labo kwabanye. Empeleni, ingabe kufanele yenziwe yini. Kanjani ubungeke yini ufune isikhathi sakho futhi ikhono lakho siqu lilinganiselwe, ngakho ukhululeke ukuphathisa ingxenye imisebenzi. Nquma emigomweni, uthole labo abakwaziyo ukukwenza, futhi ukuphathisa abanye kubo. Khuluma breakpoints nasekubulaleni usuku. Ungakhohlwa ekupheleni kunjalo ukugqugquzela abadlali.
Kanjani ukuhlela isikhathi ingane umfundise ukuthi?
abazali Modern uthi: abantwana baye baba ngaphansi asebenzayo. Banike khulula, izakuhlaliswa computer usuku lonke. Empeleni, namuhla ungathola umqondo ezimbili akuhambisani ezahlukene ukuziphatha: ngempela amaphuzu phezu kwabantwana, hhayi uzivumele ukuphefumula ezikoleni kanye namakilabhu. Kulokhu, kubalulekile ukugcina kusho segolide.
Kanjani ukuhlela isikhathi umfundi kuye ulahlekile kuye ukufunda nokuzilibazisa, amakilabhu, amakilabhu, njll? Mfundise kusukela esikoleni sabaqalayo ukuhlela usuku. Khuluma nengane yakho nokuthi yini angase kube njalo. Ngokwesibonelo, esikoleni, kwasemini, woza ekhaya, ukuphumula, ukulungiselela umsebenzi wesikole, usizo yasekhaya kanye nesikhathi siqu. Musa ukuphoqa ke, kusiza kuphela imibuzo ehamba phambili. Ekuqaleni, ukusiza ingane ukuthobela luhlelo lwekusebenta. Ngokuhamba kwesikhathi, kuzoba oludonsa ngokuphelele kule ndaba.
Kuyindida ukuthi labo abantwana umsebenzi nemibuthano esikoleni esiphezulu kabani nsuku zonke, kungcono ukwazi ukuthi ukwaba isikhathi sabo. Iqiniso lokuthi bazi kangakanani badinga ukubamba, ngakho zama. Ekuqaleni, umntwana Uhambo udinga control eqondile khona noma lapho, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngeke usakwazi kudingeka lokhu.
Indlela ukuhlela yokuzilibazisa isikhathi ingane? - Khumbula ukuthi abazali - isibonelo esihle kunazo zonke izingane. Ngakho-ke, uma wazi ukuthi ihlele isikhathi sokuba yokuba asisuse futhi izinhlu ephumelelayo izindawo, ingane kalula uyothatha uhlelo kuwe.
Kunoma ikuphi, khumbula ukuthi ukufunda isikhathi ngempumelelo Management ethatha isikhathi eside, njengoba kufanele kube umkhuba wakho. A esiningi liyadingeka ukuze kwakhiwe imikhuba. Ungalahli ithemba uma wenza ukuthi akunakwenzeka ukwenza noma ukhohlwe okuthile engingakuloba, konke iza nakho.
Enye Iqhinga ewusizo - ufunde indlela ukuzihlola. Ngakho uzokwazi ukubona ukuthi yiyiphi i amacala maloeffektinvny ngosuku, futhi yini - ngempumelelo.
Ukuhlela okuzenzekelayo noma ukuphathwa isikhathi?
Gleb Arhangelsky: Biography, indlela, ukubuyekezwa
Indlela yokuthola isikhathi ekuphileni